बिदेशी पिउने पानी आयात रोक्नुपर्ने: संसदीय उपसमिति - Lekhapadhi.com मुख्य समाचार : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
बिदेशी पिउने पानी आयात रोक्नुपर्ने: संसदीय उपसमिति
लेखक : लेखापढी १ चैत्र २०७७, आईतवार १६:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विदेशबाट नेपालमा आयातमा हुने पिउने पानीको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन संसदीय उपसमितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गत बजार अनुगमन उपसमितले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिबाट अनुमोदन भइसकेको समिति बिमलप्रसाद श्रीवास्तबले जानकारी दिए ।
अध्ययन उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाईलीले भने स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको पानी उत्पादन हुने र आयात हुने गुणस्तरको पानी नेपालमै उत्पादनको वातावरण बनाउन यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यक देखिएको हो ।
नेपालमा विदेशबाट बोतलको पानी आयात हुने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको उनको भनाइ छ । नेपालमै हिमनदी, प्राकृतिक स्रोत, खनिज स्रोत लगायतबाट उत्पादन हुने पानी उपलब्ध रहेकाले पिउने पानी आयात गर्नु बाञ्छनीय नभएको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालका पानी उत्पादकहरुलाई विदेशमा पिउने पानी निर्यात गर्न सहजीकरण गर्न पनि उपसमितिले सरकारलाई भनेको छ । विदेशमा पानी निर्यात गर्दा उत्पादन, भण्डारण र आपूर्ति प्रकृयाको आईएसओ सर्टिफिकेट लिएर मात्रै गर्नुपर्ने पनि उपसमितिले भनेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा अमेरिका र यूरोपेलीसहितका मुलुकबाट २३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको झण्डै ३५ हजार लिटर बोतल बन्द पिउने पानी आयात भएको थियो ।
विश्व बैंकसंग सरकारको आर्थिक सहयोग सम्झौता
के हो आईपीओ (IPO) ? सेयर बजारमा प्रवेश चाहनेलाई टिप्स !!!
पूँजी बजार विकासको माग गर्दै लगानीकर्ताले थाले अनसन
तातोपानी नाका खुल्यो
इन्धनको मूल्य बृद्धिसँगै हवाई भाडा बढ्यो
पाटन दरबार क्षेत्रका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न हिमालयन बैंकको एक करोड सहयोग
सैनिक कल्याणकारी कोषमा ५८ अर्बभन्दा बढी रकम
साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्थाले ग्यास ११ सय २०, चिनी ६३ रुपैयाँ मा बिक्री गर्दै
कोटेश्वरको भाटभटेनीलाई ४ लाख जरिवानाको आदेश
प्रतिबन्धित रेडबुल बरामद
म्यादी प्रहरीहरुमाथि असई रवीकुमार साह तेलीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रदर्शन
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरमा काँग्रेस विजयी
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०४:१७
कैलाली लम्की चुहाको मेयरमा कांग्रेसकी शुशिला शाही, उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरी विजयी
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०३:४४